‘मेरो संघर्षको कथा’ – GadhiKhabar
२६ फाल्गुन २०७६, सोमबार १६:०२ Rajendra Rai	0 Comments
खोटाङको रोक्सिङ भन्ने ठाउँमा १९७२ साल पुस १० गते जन्मेका विर्षबहादुर तामाङ उमेरले १०४ वर्ष पुगिसकेका छन् । सम्भवत चौदण्डीगढी नगरपालिकाको मात्र नभएर उदयपुर जिल्लाकै एक मात्र जेष्ठ नागरिक हुन सक्छन् । यतिका वर्षसम्म जीवनका अनेकौ आरोहअवरोहहरु पार गर्दैै आफ्नो जुग खाँदै गरेका ।
उनी चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं. ७ भूल्के स्थित घरमै सोमबार विहान भेटिएका छन् ।
उनी ०५५ सालमा खोटाङबाट बसाईसराई लिई परिवारसहित झरेका थिए । १८ वर्षमा भारतीय सेनामा भर्ति भएपछि दोस्रो विश्व युद्धमा वर्मामा जापानसंग युद्ध लडेको कथा भैm भएको उनले स्मरणसमेत गरे । तत्कालिन ४ नं.का आफ्नै साथीहरु ४० जना भन्दा बढी सबैले वीरगति प्राप्त गरिसकेको उनले सुनाए । लगातार ६ वर्षसम्म विश्व युद्ध लड्दा लड्दा गरेर आफ्नो देश नेपाल फर्किएका उनी नेपालमा पनि जहानीया राणा शासनको अन्त्यको लागि रामप्रशाद राईको नेतृत्वमा लडाई शुरु भएको छ जाउँ फेरी अब आफ्नै लागि लड्नलाई भन्दै खोज्दै आए तर म गईन ।
पल्टनमापनि लडाई लडेर आएको मान्छे रहररै नभएर गईन धरानमा गएर बसे । उत्तिबेला रामप्रशाद राईको नाम खुब सुनिन्थ्यो । सबैले भन्थे राईले कमाण्डर समालेका छन् भन्ने कुरा वरपर सुनिन्थ्यो । तर, म प्रत्येक्ष भिड्नैकै लागि चाही गईन । दुई श्रीमति विवाह गरेका उनका ५ भाई छोरा २ बहिनी छोरीका पिता हुन् । लाहुरे जीवनीमा जागिर खाँदाको क्षण सम्झिदै व्रिटिस सरकारको कानुन कडा भएकोले गधा भैm बनाएर काममा लगाउथ्यो, उबेलाको तलव नै थोरै थियो ।
२००६ सालमा ५ रुपैयामा पेन्सन आएका उनी, पेन्सन थाप्न दरभङगा पुगेर घरसम्म फर्किएर आईपुग्दा सकिजान्थ्यो । पछि पछि धनकुटा सारियो पछि भोजपुरै सारियो हुँदा हुँदै अहिले त धरानमा छ सवारी साधनको प्रसस्ति त्यति गाह्रो छैन । उहिलेको कुरा सम्झिन्दा त आजभोलि त सपना भैm लाग्न । उहिले थापेको पेन्सन सम्झिन्दै भने अहिले त महिनाको ४० हजार रुपैया पाउने गरेको छु । उनीसंगै लाहुरे भएका अहिले कोही पनि छैनन् । सबैको निधन भईसकेको आफुमात्र बाँचि रहेको उनको भनाई थियो ।
१०४ वर्ष सम्म बाँचेर देशको राज्य सत्तासंगै देशको उथलपुथल सबै भोगिसकेका उनीसंगको कुराकानी कसैलाई प्रेरणा बन्न सक्दछ । गढीखबर दैनिकको ‘मेरो संघर्षको कथा’ स्तम्भको निम्ति विरामीको बावजुतपनि मसंग कुराकानी गरिदिएकोमा विर्षबहादुरलाई धन्यावाद ।
–प्रस्तुति राजेन्द्र दुष्ट
← भलिबलमा १ नं. वडा विजयी
‘मेरो संघर्षको कथा’ →
१२ बैशाख २०७७, शुक्रबार १२:५३ Rajendra Rai 0